Fanafihana mitam-piadiana adidiko ny Canadian Crypto Exchange - Vaovao farany - Blockchain News
Fanafihana mitam-piadiana adidiko ny Canadian Crypto Exchange
Mitam-piadiana fanafihana ny Canadian Crypto Exchange
Amin'ny talata, Janoary 23, 2018, manodidina 11 aho, jiolahy mitam-piadiana telo niditra ny biraon'ny BitCoins Kanadiana any Ottawa ka namely efatra mpikambana ao amin'ny fifanakalozana. Ny fananana mifandray azy ireo sy fandrahonana tamin'ny basy, ny mpanao heloka bevava nitaky mba hamindra ny vola ho an'ny fifanakalozana ho azy ireo. Ny fahadimy mpiasa, izay nijanona ho voamariky, niantso ny polisy, ary ny jirika nandositra niaraka na inona na inona.
Ny iray amin'ireo ahiahiana, iray 19 taona, mponina ao Ottawa, dia notànana. Nampangain'ny ny fandrombahana amin'ny ny fampiasana ny basy sy ny herin'ny fihazonana. Ny polisy Ottawa mitady mpandray anjara roa hafa ao amin'ny heloka bevava.
Kanadiana CBC News andiany tatitra fa ny jirika nitady vola amin'ny crypto fifanakalozana.
Tsy ity no voalohany mpihazona ny fanafihana Cryptocurrency. Tamin'ny volana Novambra, ny mponina ao New Jersey, Louis Metz, nanafika ny tompon'ilay ny fampitana. Mandrahona ny basy, dia naka ny niharam-boina ny finday sy ny fanalahidy manokana, izay nampiasaina mba hahazoana ny niomerika kitapom-batsy. Vokatr'izany, dia nangalatra ny $ 1.8 crypto tapitrisa vola. Miatrika ny ratsy hatramin'ny 25 taona an-tranomaizina.
Dia Bitcoin ny Tetikasa ny US Intelligence ?
vola - Earning $60 Per We...
Mafana: A new report from Pr...
Previous Post:Blockchain News 25 Janoary 2018
Next Post:Ny mpahay matematika kajy ny vidin-bitcoin for 2018